सिरहामा गुणस्तरीय सामग्रीको उद्योग संचालनमा « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
सिरहामा गुणस्तरीय सामग्रीको उद्योग संचालनमा
महेश सिंह/सिरहा १५ असार
सिरहाको कर्जनहा नगरपालिकामा ज्यापनीज प्राविधिको फ्याकट्री संचालनमा आएको छ । बिकास निर्माणको कामको लागि सिरहामा पहिलो गुणस्तरीय सामग्रीको उद्योग संलान भए पछि ठेकेदार कम्पनी र कनट्रक्सन कम्पनीहरु लभाम्बित भएका छन् ।
सिरहाको धेरै स्थानीय तहमा बिकास निर्माण काम गर्न अधुरा रहेको ले बिकास निर्माणमा प्रयोग हुने ,होम पाईप, बिजुली पोल , बल्क ईटा ,विभिन्न किसिमको ईसट्टरलक र आर .एम. सी. सिरहामा प्रहिलो पल्ट उत्पादनमा आएको छ ।
सिरहामा बिकास हुन् लागदा बाहिर बाट सम्मान हरु ल्याउन परेकोले सिरहामा मै उधोग संचालन भए पछि कनट्रक्सन कम्पनीहरु खुशी भएका छन्। महेन्द्र राजमार्ग भन्दा करिब २०० मिटर उतर पर्टी ठुलो रकमको लगानीमा संचालनमा रहेको संचालक कुशेश्वर महतो अर्को शरेयर धनी कुसेश्वर साह ले जानकारी दिनु भयो। उधोग सुरुवाती फेजमै राम्रो मार्केट लिएको उनले साहले बताए ।
उगोगमा सिरहा सप्तरी धनुषा लगायत छिमेकी मुलुक भारतको दकक्ष अनुभवबी कारीगरद्वरा सम्मानहरु उत्पादन हुने गरेको उद्योगमा दुई दर्जन भन्दा बढी कामदारहरु रोजगारी पाएको महतोले बताए ।
आशाका किरणद्धारा देउखुरीका ३ स्वास्थ्य चौकीमा अटो सेनिटाइजर मेसिन प्रदान